KWISIKHUMBUZO SAYO SAMA-20, U-YU-GI-OH! ABASETYHINI BAHLALA KWIXESHA ELIDLULILEYO - ANIME
Udavid X Cohen
Kwisikhumbuzo sayo sama-20, u-Yu-Gi-Oh! Ngaba isabambekile kwixa elidlulileyo xa isiza kubafazi
Lo nyaka uphawula isikhumbuzo seminyaka engama-20 yothotho lwee-manga kunye ne-anime franchise Yu-Gi-Oh! Ukukhumbula isikhumbuzo, kuya kubakho imuvi Ikhuphe le ntwasahlobo eJapan inabalinganiswa abavela kuthotho lwantlandlolo. Njengomntu othande ukubukela uguqulelo lwesiNgesi kuthotho lwe-anime ukusuka kumabanga aphantsi ukuya kwisikolo samabanga aphakamileyo, ndonwabile kakhulu ngale nto. Nangona kunjalo, ngasemva kovuyo yimvakalelo emnandi evela ekungabinayo i-duelist yabasetyhini yokujonga njenge fan.
Yu-Gi-Oh! yenziwe nguKazuki Takahashi kwaye imiselwe kwihlabathi apho abalinganiswa badlala khona izilo kunye nomdlalo wekhadi lomlingo obizwa ngokuba ziiDuel Monsters. Umntu ophambili kuthotho lwantlandlolo nguYugi Motou, inkwenkwe ethanda imidlalo kunye neepuzzle kodwa ihlala ixhatshazwa. Xa uYugi esombulula into yakudala yase-Egypt ebizwa ngokuba yiMillennium Puzzle, umzimba wakhe uba ngumamkeli womoya onobuchule obukhulu kwiiDuel Monsters.
odlala katy on letterkenny
Kuwo omabini ama-manga kunye ne-anime, umoya (owaziwa ngokuba nguYami Yugi kangangexesha) unceda uYugi abe nguKumkani weMidlalo ngokuphumelela ukhuphiswano loBukumkani boDuelist. Ngaphandle kweYugi, kukho abanye abantu abangamadoda ababethayo, njengomhlobo wakhe osenyongweni, uJoey Wheeler, kunye nembangi yakhe, uSeito Kaiba. Nangona kunjalo, i-duelist yabasetyhini kuphela kuthotho lokuqala yayingu-Mai Valentine.
Xa kuthelekiswa noogxa bakhe abangamadoda, izakhono zokuphola zikaMai ziphakathi. Nangona enekhadi lekhadi kunye nezilwanyana ezipholileyo zabasetyhini ezaziwa ngokuba ziiHarpy Ladies, akazange aboniswe njengobuchule njengabafana. Xa izakhono zokuphamba zikaMai ziboniswa okokuqala, kutyhilwa ukuba watshiza iziqholo ezahlukileyo kumakhadi akhe ukukhupha abachasi bakhe ngokubenza bacinge ukuba angaqikelela amakhadi akhe ngaphandle kokujonga.
Akuncedi nokuba uyilo lomlinganiswa wakhe lifane nebhombu ebomvu. Xa eqala ukuvela kwi-anime, uJoey Wheeler uyamrhaxela. Kwityala likaMai, wayengumntu ozingcayo kunye nekratshi owaye wafunda ukuvula abanye. Ukanti ukuba le ibe kuphela kwempawu ehlangulayo ngaye ithi lukhulu malunga nokukhula komlinganiswa wakhe.
Kwenzeka into efanayo ngomlinganiswa wesibini uAnzu Makzaki (Tea Gardner kuhlobo lwesiNgesi). Kwi-manga, u-Anzu ngumhlobo wobuntwana kunye nothando lomdla kuYugi kodwa ukwangumntu ochukumisayo ngokwaneleyo ukubonelela ngenkonzo yabalandeli babafundi abangamadoda. Kwinguqulelo yesiNgesi ye-anime, iti yayingumntu ochulumancisayo owayehlala esenza iintetho ezinkulu ngobuhlobo.
Ngaphandle kwabalinganiswa ababhinqileyo abangabantu, ezinye zezilwanyana ezikhulu ezibhinqileyo zinezinto ezothusayo ezinokuthi zigqumise iindima zazo, owona mzekelo ubalaseleyo uyiNtombazana eyiMagic Dark. Njengomlingani wabasetyhini kuMlingo oMnyama, ucinga ukuba baya kujongeka ngokufanayo. Endaweni yoko, uMlingo oMnyama ufumana isinxibo esigubungela yonke into ngelixa intombazana emnyama efumana isinxibo esixhoma amagxa akhe kwaye sibonisa ubuqaqawuli. Ngapha koko, ngelixa uMlingo oMnyama ejonge ebukhosini kwaye enzulu xa ebizwa, Intombazana eyiMagic emnyama idlala ngeewinks ezimnandi kunye neeposisi.
Ngaphezulu kokunqongophala kwabaseDuelists abanezakhono kunye nabalandeli beenkonzo zeDuel monsters kukuswela amandla okudlala njengeDuelist yabasetyhini kwi Yu-Gi-Oh! imidlalo. Ndidlale imidlalo emithathu kwi-franchise: Yu-Gi-Oh! Iinkumbulo ezingavumelekanga , Yu-Gi-Oh! I-Capsule Monsters Coliseum , kunye Yu-Gi-Oh! Abafowunelwa beMimoya yeGX . Kwimidlalo emibini yokuqala, udlala njengoYugi, kodwa kwi Abafowunelwa nguMoya , udlala njengophawu olungacwangciswanga onokuthile igama kwaye wenze ngokwezifiso. Nangona kunjalo, akukho khetho lokudlala njengomntu obhinqileyo.
Nangona i-manga kunye ne-anime ekuqaleni yayijolise emadodeni, ayifanele ukuba ithi abalinganiswa ababhinqileyo kufuneka bancitshiswe babe ngabadlali besibini abaphambili, ukuthanda umdla, abalinganiswa beenkonzo zabalandeli, ii-cheerleader, okanye indibaniselwano yezi. Kananjalo ayifanele ukuba ithetha ukuba akunakubakho umlinganiswa okhokelayo wabasetyhini, kodwa kubonakala ngathi amathuba okwenzeka oko mancinci.
Ndayeka ukubukela Yu-Gi-Oh! anime ngamanye amaxesha ngexesha Yu-Gi-Oh! GX Ixesha. Ngokusekwe kuphando endilwenzileyo, kuncinci okutshintshileyo malunga nendlela emelwe ngayo abalinganiswa ababhinqileyo. Nangona bendikhe ndayigqitha ubukhulu becala Yu-Gi-Oh! I-franchise, ndiyazi ukuba kukho isizukulwana esitsha sabalandeli basetyhini abafuna ukuzibona njengoKumkanikazi weMidlalo. Umbuzo ngulo, ngaba uya kuze afike?
(imifanekiso ngeToi animation)
U-Latonya Pennington ngumbhali onegalelo kwi-Black Girl Nerds kunye ne-Afropunk. Kwixesha elidlulileyo, wenza iziqwenga zeAtlanta Blackstar, yeHarriet, kunye neBuzzfeed. Uhlala kwenye indawo kumazantsi eUnited States kwaye uchitha ixesha elininzi emamele umculo, ebukela iinkqubo ezikwi-Intanethi kunye nokufunda. Mfumane Twitter .
Isifo Seswekile Iii
Kutheni benze i-domino emnyama
Ixesha lekhari njengekhadinali richelieu
I-rhett kunye nekhonkco lobuso bekrisimesi
Ngu catherine zeta jones ispanish
Ilitye le-sharon kunye ne-sebastian stan
umphindezeli kwimfazwe engapheliyo itreyila